'Ny goosebumps!' - Kintana WWE teo aloha tamin'ny fisehoana tampoka avy tamin'i The Undertaker [Exclusive] - Wwe
Ny fisehoan'ny WWE tsy nampoizin'i Undertaker dia namorona fotoana mampientanentana foana nandritra ireo folo taona lasa. Ankehitriny, ny kintana WWE teo aloha Ricardo Rodriguez dia nitantara ny zavatra niainany tamin'ny hetsika mivantana iray izay nanasongadinana The Phenom.
Raha niresaka tamin'i Riju Dasgupta an'ny Sportskeeda Wrestling, i Rodriguez dia nilazalaza ny fihetsiny ho toy ny iray izay nanome azy goosebumps avy hatrany.
Ny Undertaker (tena anarana - Mark Calaway), teratany Texas, dia matetika no mipoitra amin'ny hetsika mivantana WWE izay natao manodidina ny faritra misy azy. Ricardo Rodriguez dia nanambara fa ny fisehoan'ny The Deadman dia nahagaga ny olona rehetra tamin'ny voalohany.
'Tadidiko ny voalohany, heveriko fa tany Lubbock, Texas izahay. Seho an-trano io. Izy [The Undertaker] dia tsy nambara [ho an'ny seho]. ' Notohizan'i Ricardo Rodriguez hoe: 'Tsy tadidiko hoe iza no tao amin'ilay lalao. Fa tao anaty peratra daholo ny rehetra, tampoka teo dia henonao ny gong, ary avy eo nirehitra ny jiro. Banga masina, ny goosebumps! Satria nihetsika ny rehetra. Ary mahazo goosebumps aho izao. Miakatra ny jiro, ary avy eo [henontsika] ny gong, ary miverina midina indray izy ireo. Nanesoeso ny vahoaka izy ireo mandra-pahatongan'ny fotoana nitendrena ny mozika. Mahagaga! '
Mpankafy sy superstar WWE maro no nilazalaza traikefa mitovy amin'ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny The Undertaker, satria ny fidirana malaza nataony dia nahatsapa ho fotoana lehibe kokoa noho ny fiainana.
Efa niampita lalana tamin'i Alberto Del Rio tao amin'ny WWE ve i Undertaker?
Nanomboka tamin'ny 2010-2013, Ricardo Rodriguez dia nalaza tamin'ny WWE tamin'ny alàlan'ny naha mpanao fanambarana peratra manokana an'i Alberto Del Rio.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana Sportskeeda Wrestling farany teo dia nanamarika i Rodriguez fa tsy niampita lalana tamin'i The Undertaker tamin'ny fahitalavitra izy sy i Del Rio. Na izany aza, nifanerasera tamin'ny kintana angano izy ireo tamin'ny hetsika mivantana.
'Tsy maintsy nifandray taminy [The Undertaker] izahay indraindray. Tsy amin'ny fahitalavitra mihitsy. ' Hoy koa i Rodriguez: 'Fampisehoana an-trano izahay. Isaky ny manodidina ny faritra misy azy izahay, raha velona izy, dia hidina [amin'ny seho] izy. '
Ilay tsara fanahy @RRWWE nanokana fotoana hiresahana amiko momba ny habetsahan'ny fanajana @BrockLesnar manana ho @PrideOfMexico ! Mampalahelo fa niady tamin'ny Live Events fotsiny izy ireo ary tsy nanana programa feno mihitsy. https://t.co/vue7zgI0fs
- Riju Dasgupta (@ rdore2000) 3 aogositra 2021
Alberto del rio dia manana niady Ny Undertaker indroa mandritra ny seho an-trano, amin'ny hetsika ekipa tag, tamin'ny 2010.
Raha misy teny nindramina nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, azafady mba omeo voninahitra Sportskeeda Wrestling ary apetraho ity horonantsary manokana ity.
ohatrinona ny vidin'ny babyface
maninona ny olona no mirehareha amin'ny vola
fitiavana vs fitiavana dia inona no maha samy hafa azy
bandy mibanjina ahy ary tsy mijery lavitra